AMISOM Waxey Ku Guuldareysatay Howllihii Loo Igmaday - Hala Dhiso Ciidamada XDS! | KEYDMEDIA ONLINE
AMISOM Waxey Ku Guuldareysatay Howllihii Loo Igmaday - Hala Dhiso Ciidamada XDS!
Cabdullahi Ibrahim — Howlgalka Midowga Africa ee Soomaaliya, AMISOM, ayaa u muuqda mid ku fashilmay howshii loo igmaday ee ay sababteeda u yimaadeen dalka Soomaaliya, taasoo ahayd ilaalinta Xarumaha Dowladda Federaalka, sida Madaxtooyada iyo Baarlamaanka oo kale, waxeyna ku fashilmeen kadib markii ay soo weerareen Kooxda Al-shabab.
Ciidamadan ayaa dalka soo galay horaantii 2007-da, waxa ayna ahaayeen kuwa marba tiradooda la kordhiyo ilaa la gaarsiiyey 22000 oo Askari, waxa ayna ka kala socdaan ciidamadan wadamada kala ah Uganda, Brundi, Jabuuti, Itoobiya, Kenya iyo Siraliyoon.
Waxtar-xumida ka muuqata ciidamadan, ayaa keentay in ay Shababku ku soo dhiiradaan in ay soo weeraraan Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, halkaas oo xarun u ah Madaxweynaha Dowladda Federaalka Xasan sheikh Maxamuud.
Ka dib markii la kordhiyey tirada ciidamadan, islamarkaana ay ku soo biireen ciidamada Itoobiya, ayaa waxay Dad badan filayeenin ay wax badan ka badali doonaan amaanka dalka, islmarkaana ay jabin doonaan Xarakada Al-shabab si ay dowladdu ula wareegto guud ahaan gobolada Koonfurta oo ay ku xoogan yihiin Al-Shabab, si dalka looga qabto doorasho xor ah Sanadka 2016, balse taasi waxaa dhacay cagsigeeda.
Waxa ay ciidamada AMISOM kala wareegeen Al-shabab dhowr magaalo oo ku yaallo Koonfurta iyo bartamaha dalka, waxa uuna hadafku ahaa in amniga la sugo, islamarkaana lagu baahiyo deegaanadaasi nidamka dowladnimo, Sidoo kalena loo fidiyo dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasi adeegyada ay u baahan yihiin sida waxbarashada iyo caafimaadka, laakiin waxaa dhacday in ay AMISOM gasho dagaal aan qorsheysneyn, kaas oo ugu danbeyn keenay in lagu go'doomiyo magaalooyinkii ay soo galeen Iyagii iyo Shacabkiiba.
Qorsha-xumida ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda, ayaa keentay in ay dhibaato baaxad leh soo gaarto Shacabkii Soomaaliyeed ee ku dhaqnaa deegaanadii lagala wareegay Xarakada Al-shabab, kuwaas oo ku go'doomay magaalooyinkoodi ka dib markii laga jaray dhamaan wadooyinkii ay u soo maraysay sahayda, aaxaana ka mid ah magaalooyinkaasi go'doonsan Garbaharey, Buurdhuubo, Xudur, Waajid, Qoryooley, Buulabarde, Ceelbuur iyo tuulooyin badan oo hoosyimaada Magalooyinkaasi.
Tabar-xumida ka muuqata ciidamada Itoobiya, oo runtii ahaa kuwa aad loo buunbuuniyey ilaa heer la gaarsiiyey in ay yihiin kuwa kaliya ee soo afjari kara joogidda Al-shabab ee Soomaaliya, Ayaa xaalka uga sii daray waayo, Waxa ay dadka qaar filaayeen in ay ciidamada Itoobiya soo hoyin doonaan guulo waa weyn oo horseeda in ay Al-Shabab kala cararto laakiin waxaa dhacday in Iyagiiba la go'doomiyo, Islamarkaana laga jaro wadooyinkii sahayda.Taasoo ugu danbeyn keeneysa in ay cararaan siday marar badanba sameeyeen.
Fashilka ka muuqda howlgalka AMISOM, Ayaa waxaa sababtiisa leh kuwa isku sheega Beesha Caalamka, Maxaa yeelay, Waxa ay iska diideen baaqyo badan oo loo soo jeediyey, Baaqyadaas oo lagu dalbanayey in la dhiso ciidamo Soomaali ah oo xooggan Islamarkaana si wanaagsan u qalabeysan, si ay ula wareegaan amaanka dalka laakiin taasi ma dhicin sababa badan oo jira dartooda,Waxaana sababahaasi ugu weyn dowladaha dariska oo u arka Soomaaliya oo leh ciidan xoogan in ay qatar ku tahay jiritaankooda.
Hadaba haddii uu xaalku sidan noqday, Maxaa la gudboon hogaanka sare ee Dowladda? Ma waxa ay wali isku sii halaynayaan ku tiirsanaanta ciidamo Shisheeye ? Mise waa ay isku tashanayaan ?
Kolay waxa ay Anigu ila tahay caqli-xumo in aad isku halayso qof kale, Maxaa yeelay qofkan aad isku halayneyso waa Bini'aadam, waxa uuna qaadan karaa go'aan deg deg waliba Isaga oo aan kula tashan, Sidaa daraadeed waxa ay Dowladda u baahan tahay in ay la timaaddo xal kale (alternative) si dhibkan looga, islamarkaana loo helo nabad waarta.
Maadaama ay Dowladda ku tiirasaneyd taageerada Beesha Caalamka mudda ka badan 10 sano, Islamarkaana aysan waxba soo kordhinin taageeradaasi marka laga reebo balanqaadyo been ah iyo dabaal-joogteyn aan dhamaad lahayn, tusaale ahaan, 10 Sano ka dib ma lahan Dowladda Federaalka ciidamo la isku halayn karo oo la wareega amaanka dalka. Kama hadlayno Maleeshiyo beeleedyo huwan magac dowladeed.
Hadaba haddii lagu hungoobay taageerada Beesha Caalamka, Islamarkaana ay AMISOM saaran tahay tareenkii fashilka, sidoo kalena ay Dowladdu u baahan tahay taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Hadaba maxaa xal ah ? Anigu Shaqsiyan, Waxa ay ila tahay in markan loo baahan yahay in la raadiyo taageerada Shacabka Soomaaliyeed haday ahaan lahaayeen kuwa gudaha iyo haday ahaan lahaayeen kuwa dibaddaba si looga maarmo ku tiirsanaanta Shisheeyaha.
Waa in ay aragtidan noqotaa mid ka tarjumeysa baahida loo qabo dib-u-heshiisiin dhab, Islamarkaana isu keeni karta dhamaan dhinacyada siyaasadeed ee dalka ka jira sida Dowladda,Al-shabab, Somaliland, Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Jubba iyo kooxda ku wareertay siyaasadda Soomaaliya ee la baxday Ahlu-Sunna.Magac fiicanaa oo hadana muuna xumaaa.
Aragtidan cusub ee aan ka hadlayo, waa in ay abuurtaa jawi cusub oo keeni kara in ay ka qeybqaataan hanaanka siyaasadeed ee dalka dhamaan qeybaha kala duwan ee Mujtamaca Soomaaliyeed sida Culimada,Aqoonyahanada, Siyaasiyiinta, Haweenka iyo Dhalinyarada si looga baxo dhibaatadan daba-dheeraatay. Waxaana rajaynaa haddii la helo wadaxaajood dhab, Islamarkaana meel la iska dhigo danaha Shisheeye in ay Shacabka Soomaaliyeed awoodaan in ay soo afjaraan khilaafaad dhexdooda ah.
In ay ku dhawaaqaan hogaanka sare ee Dowladda ku dhaqanka Shareecada Islaamka, loona bilaabo hergelinteeda si tartiib tartiib ah.
In uu Madaxweynuhu bilaabo shirar uu la yeelanayo qeybaha kala duwan ee Bulshada Soomaaliyeed sida Culimada, Aqoonyanahada, Siyaasiyiinta, Haweenka iyo Dhalinyada, islamarkaana uu qaato talooyinkooda.
In ay Dowladdu la fadhiisato shuruud la'aan dhamaan dhinacyada siyaasadeed ee dalka ka jira sida Al-shabab oo kale si loo joojiyo dhiigaan daadanayo.
In ay Dowladdu waqti cayiman u qabato joogista ciidamada Shisheeyaha ah (Amisom) si meesha looga saaro marmarsiiyada Shisheeye diidka ah.
In ay u guryahahooda ugu tagaan hogaanka sare ee Dowladda gaar ahaan Madaxweynaha cid kasta oo wax tabaneysa sida Somaliland oo kale.
In ay Dowladdu go'aan adag ka qaadato arinta guryaha la kala haysto gaara ahaan Muqdisho si meesha looga saaro marmarsiyada kuwa dowlad dhexe diidka ah.